सिभिलको ४२ लाख ३८ हजार कित्ता सेयर लिलामी बिक्री खुला, सेयर भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिभिलको ४२ लाख ३८ हजार कित्ता सेयर लिलामी बिक्री खुला, सेयर भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौँ - सिभिल बैंकको आज देखि लिलामी बिक्री खुला हुने भएको छ । बैंकले संस्थापक समूहको ३२ लाख ४४ हजार ६००.२५ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ९ लाख ९४ हजार ३५८.७५ कित्ता गरि करिव ४२ लाख ३८ हजार ९५८.७५ कित्ता सेयर लिलामी बिक्री खुला गरेको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसभन्दा बढी भाउ तोकी आवेदन दिनुपर्नेछ । लिलामीमा आवेदन दिने अन्तिम म्याद चैत १ गतेसम्म तोकिएको छ ।
सिभिल बैंकले मंसिर २२ देखि माघ १२ गतेसम्म १०ः४ अनुपातमा २ करोड ७ लाख ४० हजार ८८६.७५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । त्यस समयभित्र आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर नबिकेपछि बैंकले बाँकी रहेको सेयर लिलामीमा ल्याएको हो ।